December Maalin Xusuuq Warbixin + Sawiro
Home Opinion December Maalin Xusuuq Warbixin + Sawiro
Sadexda December Sanadii 2009 ka waxa ay ahayd maalin madow, taasoo soo food saartay Umada Soomaaliyeed ha joogaan Dibada ama Dalka Gudihiisa.
Hoteel Shaamow Maalinti ay Taariikhda ku beegneyd 3 December 2009 ka waxaa ka socotay Xaflad aad u qurux badan , taasoo ahayd Xaflad Qalin ah oo loo sameeyay Ardey dhameysatay waxbasrahada, kana bartay Jaamacada Banaadir , kuwaasoo mudo 6 Sano soo waday waxbarasho, kuna baranayay dal colaado daashadeen.
Xaflada waxaa ay ahayd mid aad u sareysa, waxaa ka soo qeyb galay Dad aad u badan sida Wasiiradi Xukuumada KMG ahayd wasiirka Waxbarashada Axmed C/laahi Waayeel , Wasiirka Tacliinta Sare C/laahi Axmed Cadow , Wasiirka Caafimaadka Drs Qamar Aadan Cali, Dhakhaatiir Soomaaliyeed , Siyaasiyiin , Aqoonyahano, Waalidiin farxada la qeybsanayay Caruurtooda , Ardeyda Jaamacada Banaadir, Iyo Marti sharaf ka timid Dalka Dibadiisa kuwaasoo farxada la qeybsanayay walaalahood.
Jawigu wuxuu ahaa mid wanaagsan, Xafladana waxa ay ku Bilaabatay si aad u qurux badan, waxaana dhamaan Dadka goobta fadhiyay Saqiir iyo Kabiir wajigiisa laga dheehan karay sida uu u faraxsan yahay, iska daa Waalidiinta ay Caruurtooda qalin jabineyso oo iyagu farxadooda aan maalintaasi la qiyaasi karin.
Waxaa Goobta ka Bilowday Khudbado aad u macaan, waxaana khudbadaha soo jeedinayay Maamulka Jaamacada Banaadir , Macalimiin, Ardey , Siyaasiyiin iyo Dhakhaatiirta wax ka dhiga Jaamacada Banaadir Kuliyada Caafimaadka.
Pr Cusmaan Dufle marki uu qaatay Khudbada waxaa isbadalay goobta, waxaana dhacay qarax aad u weyn, kaasoo galaaftay Dad badan oo ay ku jiraan Wasiiradii Xukuumada KMG ahayd ee xilkigaasi shaqeyneysay.
Qofka is qarxiyay waxaa uu fadhiyay afaafka hore ee Hoolka, waxaana qeybaha hore fadhiyay madaxda lagu casuumay xaflada oo isugu jiray Wasiiro iyo Maamulka Jaamacada Banaadir iyo marti sharaf kale.
Allaha u naxariistee waxaa goobta nafta kaga baxday Wasiirkii Waxbarashada Soomaaliya Axmed C/laahi Waayeel , Wasiirkii Hidaha iyo Tacliinta Sare Pr. C/laahi Axmed Cadow, Wasiirkii Caafimaadka Drs Qamar Aadan Cali , Dhanka Jaamacada waxaa kaga geeriyooday Dr Shahiid oo ahaa Madaxa Jaamacada Banaadir, Ardey aad u badan.
Sidoo kale wuxuu galaaftay Waalidiin u tagay Xaflada inay farxada la qeybsadaan Caruurtooda balse qaarkood ku dhinteen qaraxa , halka kuwa kalana farxadi loogu badalay geerida caruurtooda ay wax soo barayeen mudada 6 sano ahayd.
Hadaan nahay Suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan hilmaami karin qarxaasi dhibaatada uu inoo geystay, anagoo ku weynay wariyayaal qaali ah oo xiligaasi xaflada duubayay, halka kuwa kalana ay dhaawacmeen oo maanta ay shaqadooda bilaabeen.
Saxafiyiinti naga dhintay waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee Maxamed Amiin Aadan Cabdulle oo u shaqeynayay idaacadda Shabeelle iyo Xasan Subeyn Xaaji Xasan oo isaguna ahaa sawir qaade ka tirsan telefishinka Al-Carabiya, waxaana ku dhaawacmay qarxaasi C/qaadir Cumar Cabdulle oo u shaqeynayay Universal TV.
Qaraxa marki uu dhacay waxaa wadooyinka Muqdisho xiray Gaadiidka Gurmadka ah, kuwaasoo daabulayay dhaawacyada, sidoo kale dadkii qaraxa ka badbaaday ayaa iyagana ku mashquulsanaa inay gacmahooda ku badbaadiyaan walaalaha dhaawaca ah, iyagoo ula cararay Isbitaalka Madiina oo aan sidaasi uga fogeyn Hoteel Shaamow.
Qaraxa kadib waxaa hadlay Madaxweynihii DKMG Soomaaliya ee xiligaasi Mudane Shariif Sheekh Axmed, isagoo Tacsi Tiiraanyo leh u diray Dhamaan Shacabka Soomaaliyeed Dal iyo Dibadba, wuxuuna Tacsi gaar ah u diray Eheladii ay ka baxeen dhamaan dadkii ku dhintay qaraxaasi waxashnimada ahaa.
Dowlada KMG Soomaaliya ee xiligaasi jirtay waa ay dadaashay waxayna caafimaad u radaisay Dhaawacyadii darnaa , waxaana loo kala qaaday Dalka Kenya, iyadoo kadibna loo wareejiyay Dalka Sucuudi Carbiya, waxaana dhaawacyadii Sucuudiga la geeyay ka mid ahaa Allaha u naxariistee Wasiirkii Isboortiska iyo Dhalinyarada xukuumadoo KMG ahayd Saleebaan Colaad Rooble oo ku geeriyooday Sucuudiga kadib marki uu sii darsaday dhaawicii ka soo gaaray qaraxaasi.
Dadka ugu indha xumada badnaa waxa ay ahaayeen Waalidiinta , waayo waxa ay ku waayeen Qaraxaasi Dhalinyaro ay ku soo bixiyeen Dadaal iyo Dhaqaalo, sidia ay Maanta u anfici lahaayeen Dalkooda iyo Dadkooda, sidoo kale maanta waalidiintan waxay is lahaayeen ku nasta caruurtiina, laakiin Qadarta Rabi ayaa ka dhigtay kuwa ay ku waayeen Caruurtooda, inkastoo ay dishay gacan ka xaq daran.
Waalidiinta qaar oo ka hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dhacdadan ay tahay mid aysan filaneynin, iyagoo sheegay wixii dhacay inay ahayd mid ka baxsan Bani’aadanimada, maadaama ay xafladu ahayd mid ay dhiganayeen Ardey qalin jabineyso.
Qofka isku qarxiyay Hoteel Shaamow ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa Alshabaab, isagoo ninka qaraxa fuliyay uu Hoteelka dagay Maalmo ka hor si uu qaraxaasi u fuliyo, sidoo kale cadeymaha la hayo waxaa ka mid ah in Ninkan uu ka yimid Dalka Dibadiisa.
Alshabaab iyaga si cad uma qiran, balse waxaa jira warar hoose oo sheegaya inay alshabaab ka dambeeyeen qaraxaasi.
Alshabaab ayaa dhowr jeer fuliyay qaraxyo aad u culus, waxaana ka mid ahaa qaraxyadii ugu dambeeyay midki ka dhacay Tiyaatarka qaranka, kaasoo lagu laayay Bahweynta Isboortiska.
Ilaa hada Umada Soomaaliyeed kama go’in dhibaatada qaraxaasi lagu laayay Ardada Soomaaliyeed iyo waxgaradkii ka qeyb galayay qalin jabitooda.
W/Q Fowzi Mohamuud Yuusuf